Soanierana Ivongo : lakana nivadika nahafaty olona dimy | NewsMada
Soanierana Ivongo : lakana nivadika nahafaty olona dimy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomamy, ny zoma 23 marsa teo, tokony ho tamin’ny 3 ora sy 30 minitra tolakandro, tao amin’ny reniranon’ i Fotsialanana, disitrikan’ i Soanierana Ivongo, faritra Analanjirofo, ka nahafatesana olona dimy. Lakamby iray mahazaka olona hatramin’ny 80, nitondra olona 60 tamin’ io fotoana io no nivadika tampoka ary namoizana ain’ olona dimy mianadahy. Ny roa tamin’ ireo no vehivavy ary anisan’ izany ilay mpampianatra avy ao Fotsialanana saika hihazo an’ i Soanierana Ivongo.
Renim-pianakaviana iray vao niteraka zaza menavava 15 andro kosa ny faharoa amin’ny vehivavy.
Niala tao Fotsialanana ary nihazo an’ i Soanierana Ivongo ity lakamby mandeha maotera ity ary nivadika teo amin’ny manamorona ny tanàna iray antsoina hoe Fandrianomby. Raha ny nambaran’ny mpitondra lakana, sahaza azy tsara ny vesatra nentiny fa tsy mazava kosa ny antony nahatonga ny fivadihana tampoka. Tsara ny toetr’ andro ka tsy nisy onja firy na dia eo aza ny fifanakaikezana ny vavavinany .
Nisy kosa nilaza ireo mpahay tantara momba an’ity reniranon’ i Fotsialanana ity, fa mety nisy nitondra zavatra fady na koa nanao fihetsika fadin’ ilay renirano ireo mpandeha.
Efa hita ny roa lahy
Hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra, mbola roa lahy hatreto no hita faty. Efa manao ny fikarohana ny mponina ao an-toerana, tarihan’ny ben’ny Tanànan’ i Soanierana Ivongo, mpitandro filaminana, mpampianatra ary ny mpanjono sy fokonolona. Ny sasany mampiasa ny fitaovana fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina, ny hafa manaraka hatrany ny moron-dranomasina sao efa dify ny vavavinany ireo olona tsy hita. Handrotsahana harato avokoa izay heverina mety ahitana ny razana. Na izany aza, manao antso ho an’ny rehetra hifanome tanana ny lehiben’ny faritra Analanjirofo amin’ny fikarohana ireo razana mbola tsy hita.